विश्वयुद्धमा प्रयोग गरियो चकलेट::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
विश्वयुद्धमा प्रयोग गरियो चकलेट
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन १३, २०७१
चकलेट केटाकेटीले खाने चिज हो भन्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन्, तर चकलेट शक्तिको स्रोत पनि हो भन्ने कमैलाई थाहा होला । चकलेट पनि विभिन्न प्रकारका पाईन थालेका छन् । सन्तुलितरुपमा चकलेट खाने हो भने शक्ति प्राप्त हुने कुरा अमेरिकीहरुले दोस्रो विश्व युद्धमा हातहतियार, बम, बारुद, तोप र चकलेट लिएर युद्ध गर्न गएकोले पनि पुष्टी गर्छ । थकान र तनाब कम गर्न पनि चकलेटले धेरै सहयोग गर्दछ ।
कोकोआको रुखमा फल्ने कोको फलबाट डार्क चकलेट बनाउने गरिन्छ । कोकोआ मिश्रीत गाडा खैरो चकलेट हाम्रो स्वास्थको लागी पनि फाइदाजनक छ । मात्रा मिलाएर खाने हो भने चकलेटले शारीरिक तन्दुरुस्ती प्रदान गर्छ । ब्रोनविली, डेरि मिल्क, मार्श वार, वारु, चङ्की, नेष्टली जस्ता चकलेटहरु स्वास्थका लागी फाइदाजनक छन् ।
चकलेटका केही फाईदाहरु ः
रक्तसंचार राम्रोसँग हुन मद्दत पु¥याउँछ
रक्तचाप ज्यादा भएका व्यक्तिले हप्तामा २–३ पटक थोरै थोरै चकलेट खाँदा रक्तचाप कम गर्न सहयोग गर्छ । रक्तसंचार र रक्तसंहति (घाउ लागेको ठाउँमा रगत जम्ने प्रक्रिया) मा सुधार ल्याउनुका साथै नशालाई पनि फाइदा पु¥याउँछ । छालालाई राम्रो बनाउनुका साथै अनुहारको चमक बढाउँछ र नैराष्यता कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
गाढा चकलेटले रक्तसंचारमा फाइदा पु¥याउने भएकाले , दिमागमा र मुटुमा रक्तसंचारको क्रम बढि हुन्छ । यसले विचार गर्ने, बुझ्ने, सम्झने र सिक्ने क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । डार्क चकलेट गर्भवति महिलाले खाँदा फाइदा पुग्ने र बच्चा रुन्चे नहुने पनि रिसर्चले प्रमाणित गरेको छ ।
डार्क चकलेट एंटीओक्सिडिक हुन्छ
एंटीओक्सिडेंटले हाम्रो शरीरमा असमानता ल्याउने तत्वहरुलाई हटाउन सहयोग गर्छ । डार्क चकलेट एंटीएजीङ फ्याक्टर मध्ये एक हो जसले बुढ्यौलीपनका लक्षणहरु पनि केहि हदसम्म कम गर्छ र क्यान्सर हुने सम्भावनालाई न्यून गर्छ ।
दाँतको इनामेल कम हुन दिँदैन
‘चकलेट खाँदा दाँत बिग्रिन्छ’ भन्ने कुरा हामीले सुन्ने र भन्ने पनि गर्छौं । सुनेको कुरा केही सत्य होलान् तर सबै चकलेटले दाँत बिगार्दैनन् । र्डाक चकलेटमा हुने थियोब्रोमिनले दाँतमा इनामेल कम हुन दिँदैन । उचित दाँतको सरसफाइ गर्ने र डार्क चकलेट खाने हो भने दाँतमा क्याभेटिज बढ्न दिँदैन । र यसले खोकीलाई पनि कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
डार्क चकलेटमा भिटामीन र मिनरल्स उच्च मात्रामा पाइन्छ
कोकोआ मिश्रीत चकलेटमा पोेटासियम, कपर, म्याग्नेसियम, आइरन रहेका हुन्छन् । कपरले हृदयघात र मस्तिष्कघात हुनबाट जोगाउँछ भने आइरनले रक्तअल्पता हुनबाट जोगाउँछ । म्याग्नेसियमले मधुमेह , उच्च रक्तचाप र हृदय रोगबाट जोगाउँछ । डार्क चकलेटमा हुने बिभिन्न तत्वहरुले कोलेस्ट्रोल पनि कम गराउन सघाउँछ ।
औषधीको प्रयोगमा गरिने यी गल्ती कति भयानक हुनसक्छ ?
पुरुषको विर्य दैनिक फाल्नु असर कि फाइदा ? नफाल्दा सेक्स पावर बढ्छ !
के तपाइलाइ थाह छ ? मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ? महिला र पुरुषले जानै पर्ने !
कुन समयमा यौनसम्बन्ध राख्दा भइन्छ गर्भवती ? (जान्नुहोस्)
महिनावारीमा प्याडको विकल्प कप, कसरी प्रयोग गर्ने ? (जान्नुहोस्)